Maxaa ka mid ahaa?
Sort By Default Order Qiimo - Low to High Qiimo - High to Low Date - Old to New Date - New to Old
100% Dayac Penthouse In Exclusive Location!
Xilbaa de la Arena, Santiago del Teide , Tenerife
€ 1,600 bishii
iib: hantida Exclusive in xilbaa de la Arena, Tenerife! Tani waa guri ugu korraysa, geeska penthouse gaar ah ku yaal cidhifka lahayn ...
Xilbaa de la Arena
Apartment Modern waasac Iyadoo Pool & Garage!
guri raaxo fashana addooomadeyda waxaa la 2 qol iyo 2 bathrooms.Complex, leh berked dabaal iyo garaashyada dhulka hoostiisa. Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool: – 100% jikada qalabaysnayn ...
€ 980 /bishii
aqalka oceanfront Beautiful in dekedda jir kalluumaysiga Puerto Santiago! Mid ka mid ah daqiiqadii ka xeebta Chica ee bacaadka socdaan! Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool: –...
Apartment Dedieu Iyadoo dabbaasha Oo Tennis Maxkamadaha!
€ 1.060 /bishii
Dhammaataan ku yaal oo qayb ahaan loo hagaajiyay oceanfront 1 qolka jiifka, 1 aqalka musqusha 150 mitir xeebta La Arena Sandy. Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool:...
Oceanfront dabaq Apartment Iyadoo Pool!!
Xilbaa de la Arena, Guia de Isora , Tenerife
€ 1.680 /bishii
waasac 2 qolka jiifka, 2 aqalka musqusha ee safka kowaad badda! Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool: – 100% jikada qalabaysan makiinadda korontada,...
Horyalka Villa Iyadoo Private Pool! 600m From Sandy Beach!
€ 5,250 /bishii
Beautiful traditional villa in Playa de San Juan, Tenerife! Just 600 mitir xeebta bacaadka iyo dekedda kalluumaysiga! Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool:...
Apartment Oceanfront Iyadoo “gaarka ah” Access Si The Beach!
€ 1,200 /bishii
xaq meesha cajiib hore ee xeebta cusub ee xilbaa de la Arena, Tenerife! Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool: – 100% jikada qalabaysnayn ...
Penthouse Iyadoo Dabaasha Pool! Recently Dib ayaa loo hagaajiyay!
€ 1.280 /bishii
xaq u qurux badan penthouse dhawaan dayac tiray hore ee xeebta bacaadka La Arena! Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool: – 100% qalabaysan jikada la korontada ...
Apartment Dedieu Iyadoo Pool Oo Tennis Maxkamadaha!
€ 930 /bishii
oceanfront dhammaataan ku yaal 1 qolka jiifka, 1 aqalka musqusha 150 mitir xeebta La Arena Sandy. Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool: – 100% qalabaysan ...
€ 1,350 /bishii
horyalka Talyaaniga 2 qolka jiifka, 2 aqalka musqusha 150 mitir xeebta bacaadka La Arena! Si buuxda u qalabaysan iyo darbay nool: – 100% equipped kitchen with...
Our xafiiska waxa uu ku yaalaa tuulada qurux badan oo Masca. wadataa Khariidadaha Google:
Iyada oo ku saleysan 50 dib u eegista
Waxaan ognahay carruurta leh 2011 sanadkii. Ku dhowaad saarto sannad walba guryaha... Tenerife iyaga. Had iyo saaxiibtinimo noo, sida macaamiisha. Haddii su'aalo kac, Waxaad hubsan kartaa, in waxaa xigi doona jawaabta awoodda, ku salaysan sano oo waayo aragnimo iyo ayaa ku filan muddo dheer sii joogo jasiiradda. Faallo ka qor Puerto de Santiago :) hubin, waxaanu isticmaali doonaa adeegyada ay mustaqbalka.Akhri wax dheeraad ah
06:29 25 Laga yaabaa 14
Hay'adda u fiican ma oga kasta oo iyaga ka mid naslyshke.polzovalsya... uslugami.respekt adiga iyo waxa aad haysatid oo udachi.SpasiboAkhri wax dheeraad ah
21:43 16 Laga yaabaa 14
hay'adda yaab. madadaalada, kaliya sheeko cirfiid a!!! qiimaha la awoodi karo.... dalxiisyada sida. Aad ayaad u mahadsantahay!Akhri wax dheeraad ah
Hello! Waxaan hadda ka fasax weyn ku soo laabtay iyo... Waxaan rabnaa in aan share dareenkaa: Waxaan dhamaanteen aad u badan!!! Oo si aad u guys ka wakaaladda safar ugu mahad weyn, yaa inaga caawiyay in uu abaabulo our tiirka iyo waxa noo talinayaa bixitaannada xiiso badan. bilowga ah, Dhab ahaan baan u akhriyi dib u eegista iyo ma iibsan safar ku hagaha qiimo ah u qaali ah, inkastoo aan si adag "cadaadisay". Hagaajiyaa hay'adda - hore ee xeebta ah ee La Arena oo qiimo fiican u tegey on safar meelaha la ah jasiiradda la booqasho uu ku volcano ah (29 euro), jasiiradda of La Gomera (57 euro), dabaalan in burcad korabliki Flipper Uno 3 SFIga - 32 euro, qadada iyo khamri! Iyo sidoo kale qaadato suuqa kala iibsiga si ay u guys Loro Parque! Waxaa kici kaliya 11 euro oo ahaa mid aad u raaxo, qaaday joogsiga baska u dhow hotel ku qaaday si toos ah u park, waxaana hore u lahaa 6 saacadood oo waqti free. Waxaan u suurtagashay in ay arkaan dhammaan shows, dilaaga fiirinaya nibiriga 2 laab! Dareenkaa of show ka baxay off baaxadda! All dalxiisyada ku jiray Ruush saafi ah. Sidaas awgeed, waxaan si kalsooni leh ku talin karaa oo gasiiraddii joogtay oo dhan, iyo wakaaladda this! Durba waxaa sidoo kale aan la qorsheynayay safar uu ku. Weli ma aanan arkin wax badan, iyo sidaas rabto! guys Thanks for fasax cajiib ah oo nasiib wacan!Akhri wax dheeraad ah
deeva adeerkiis Irina
Waxaan dhawr jeer loo isticmaalo adeegyada hay'adda, qabanqaabiyayaasha... Tours waa mid aad u gaar ah oo lagu kalsoonaan karo. caleemo Service kaliya dareenkaa u fiican, laakiin halkii uu sii joogo si ay markooda hay'adda mahad galay ilaawi karin ah , madadaalo heer sare ah! All joogitaan wanaagsan!Akhri wax dheeraad ah
Iibsaday tikidhada this hay'adda Loro Park. karaa... la qorsheeyey by baska №325. Ninkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yidhi, baska waa ka qaalisan, badan Loro Express (xataa la Bono map a), in uu jiro bas ah oo ku saabsan 3 saacadood. Waxaas oo dhan waxaa loo sheegay in, sidaa darteed waxaan soo iibsaday tikidhada Loro isla Express. Waxaan su'aal ka: Fikraddaada sababtoo ah waxaa jira waddo on koonfurta ah, iyo waqooyiga ah, waayo, taas oo ay jirto baska fudud 325, iyadu waa qurux badan ... Laakiin dood ka qiimo iyo waqti ka adkaaday, Waxaan soo iibsaday tikidhada Loro Express. cajiib Markaasuu weyddiiyey darawalka ee wadada 325, sida waxaa jira bas subax in magaalada, taas oo Loro Park ee. darawalka qoray, in ku saabsan 1 SFIga 50 daqiiqo (waxba 3 SFIga!), kaarka taagan Bono 9 euro labada dhinacba (waana wax yar ka jaban, badan Loro Express). Mar kale waxaan u tageen inay hay'adda. Waxaa hore u jiray waa gabar noo xaqiijiyay, in Express ku soo laaban doona wadada woqooyi u qurux badan. Oo haddana wuxuu la hadlay, in baska 325 tagaa 3 SFIga! Maxaa, waxay dhihi, ayay ku nool halkaas waxaa wanaagsan in la ogaado, waxaan ka badan .... guud ahaan, ayay, ama ku nool qaldan waxaa, ama been! Express labada dhinac tegey xagga koonfureed wadada! Oo waxaa, iyo dib u! Well, iska ilow. xagga woqooyi ka dibna waxaan u tegey inuu garoonka diyaaradaha. jidka loo Puerto de la Cruz (halkaas oo waa Loro Park ee), Waxay qaadatay nus saac ah (oo aan 3!!!), ka dibna u guurto on baska soo socda. guud ahaan, labada karin, in si ula kac ah khiyaanayn, choby kala iibsiga vtyuhat.Akhri wax dheeraad ah